Maxay tahay sirta ka dambaysa in Kooxda Liverpool ay ku ciyaarto labis casaan ah?… (Ka bogo sheekada dhabta ah) – Gool FM
(Liverpool) 05 Abril 2020. Waxaa xaqiiqo ah in Liverpool aysan ku ciyaari jirin labis wada casaan ah ka hor 1964-kii, xilli kooxdan dhidibbada loo taagay 1892-kii, waxaa go’aamiyay in labiska ay hadda ku ciyaarto Liverpool ay xirato tababarahii halyeyga ahaa Bill Shankly.
Ujeedka Shankly waxa uu ahaa in dharka wada casaanka ah lagu cabsi geliyo kooxaha ka hor imaanaya.
Waxaa xusid mudan in Reds ay markii hore ku ciyaari jirtay funaanad iyo daba-gaab casaan ah halka sigisaanta ay ahayd mid cad.
Sidoo kale waxaa jiray mar ay ku ciyaari jirtay funaanad baluug ah iyo daba-gaab baluug-maar ah ka hor inta aanan afar sano ka dib funaanad cas iyo sigisaan cad oo ay kooxda ku ciyaari jirtay ka hor xukunkii Shankly.
“Waxaan ku ciyaari jirnay daba-gaab cad iyo lebiska kale oo wada casaan ah, funaanad cas oo diillimo caddaan ah leh, balse markii dambe waxaan u gaddisannay labis wada casaan ah, xirashada labiska wada casaanka ah waxay keentay saameyn nafsi ahaaneed.” ayuu yiri Shankly
Macallinkii hore ee Liverpool ayaa lahaa qorshaha ay kooxdiisa u go’aansatay xirashada labiska wada casaanka ah markii ay taariikhda ahayd 24-kii November 1964-kii, waana habeen ka hor kulankii ay la ballansanaayeen kooxda Anderlecht oo ay Anfield kula ciyaarayeen tartanka European Cup (oo hadda loo yaqaano Champions League) lugta koowaad ee wareeggiisa labaad.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda reer England, Ian St John ayaa sheegay in Shankly uu aaminsanaa in labiska casaanka ah uu keeni karo saameyn nafsiyeed, maadaama uu midabkaas u taaganyahay halis, marna awood.
“Qolka labiska ayuu soo galay maalin, waxaana uu labo daba-gaab oo casaan ah ku soo tuuray Ronnie Yeats oo ku yiri ‘xiro daba-gaabyadaan oo aan aragno siday u ekaadaan, Christ, Ronnie, waad ku qurxoon tihiin’” ayuu dib u milicsaday John oo ka shakeynayay markii Shankly uu qolka labiska keennay maryo billaw u ahaa labiska casaanka ah.
Sidoo kale Kabtankii Liverpool ee xilligaas, Yeats ayaa isna tilmaamay in gurigiisa isagoo jira uu taleefan ka helay macallinkiisii oo qolka labiska ugu yeeray si uu u xirto labiska oo dhammeystiran.
Kulankii ugu horreeyay ee ay labiska casaanka ah ku ciyaareen waxa ay 3-0 natiijo ah ay kaga adkaadeen kooxda Anderlecht xilli 10-kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horreysayba uu gool dhaliyay St John.
Ciyaartoyda kooxda Liverpool ayaa habeenkaas u ciyaaray si awood leh, waxaana uu labiska casaanka ah ku yeeshay saameyn xamaasad ah oo keentay inay dardaraan kooxdii ka hor timaadda.
Sidaas darteed, Shankly waxa uu saldhig u ahaa nooca Liverpool ee aan xilligan aragno, isagoo intii uu macallinka u ahaa kula guuleystay saddex jeer horyaalka Ingiriiska iyo hal mar oo ah tartanka European Cup.
Waxaana Reds xukunkii Shankly u xigay Bob Paisley iyo Joe Fagan oo iyagana guulo kala duwan ku hoggaamiyay Liverpool.